चन्द्रागिरी हिल्सको आइपीओ मंसिर १७ बाट खुल्दैं, कस-कसले दिन सक्छन् आवेदन ? – bampijhyala.com
Home > समाचार > वित्तिय > चन्द्रागिरी हिल्सको आइपीओ मंसिर १७ बाट खुल्दैं, कस-कसले दिन सक्छन् आवेदन ?
चन्द्रागिरी हिल्सको आइपीओ मंसिर १७ बाट खुल्दैं, कस-कसले दिन सक्छन् आवेदन ?
१० मंसिर २०७७, बुधबार १०:१० bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं ।। चन्द्रागिरी केबलकारको सञ्चालक कम्पनी चन्द्रागिरी हिल्सले मंसिर १७ गतेदेखि आइपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रको लागि ३ लाख ६ हजार ८१९ कित्ता सेयर जारी गर्न लागेको हो ।
चन्द्रागिरी हिल्सले १ सय अंकित मूल्यमा ३० करोड ६८ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको आइपीओ जारी गर्न लागेको छ ।
क्त आईपिओमा छिटोमा पुस १ गतेसम्म र सो अवधिसम्म पर्याप्त आवेदन नपरेमा पुस १६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ ।
कम्पनीको आइपीओ काठमाडौँ जिल्लाको चन्द्रागिरी नगपालिका वडा नम्बर ३, ४, ६ र ७ का स्थानीय वासिन्दा र मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ र १० का स्थानीय वासिन्दा र मकवानपुर कै इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का स्थानीय वासिन्दाले मात्र आवेदन दिन पाउने छन् ।
कम्पनीको शेयर निष्काशनको लागि बिक्रि प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीले स्थानीयलाई आइपीओ निष्काशन गरेपछि सर्बसाधारणको लागि आईपिओ निष्काशन गर्ने छ ।
कम्पनीले १८ करोड ४० लाख ९१ हजार बराबरको १८ लाख ४० हजार ९ सय १० कित्ता शेयर निष्काशन गर्नको लागि यस अघि नै अनुमति पाइसकेको छ ।
नोकियाले तीन सिरिजका स्मार्टफोन लन्च गर्दै, आफ्नो सबैभन्दा ठूलो लन्चको घोषणा १० मंसिर २०७७, बुधबार १०:१०
सरकारको अनुमान सही साबित हुँदै १० मंसिर २०७७, बुधबार १०:१०
रामप्रसाद भट्ट गभर्नरमा निर्वाचित १० मंसिर २०७७, बुधबार १०:१०
तत्काल लकडाउन नगर्ने सरकारको निर्णय, आज कोरोना मापदण्डबारे सार्वजनिक अपील गर्ने १० मंसिर २०७७, बुधबार १०:१०
कालिका मावि बुटवलका प्रिन्सिपलसहित ८ जनामा कोरोना सङ्क्रमण, विद्यालय केहिदिनका लागी बन्द १० मंसिर २०७७, बुधबार १०:१०